तनावमा हुनुहुन्छ ? यसरी मुक्त रहनुस् « प्रशासन
तनावमा हुनुहुन्छ ? यसरी मुक्त रहनुस्
चिन्ता र तनावबाट सायदै संसारका कोही मान्छे अछुतो रहेका होलान् । हरेक व्यक्तिलाई कुनै न कुनै प्रकारको चिन्ता हुन्छ । तनावकै कारण कतिपयले आत्महत्या समेत गर्ने गरेका छन् । नेपालीमा एक उखान निकै प्रचलित छ, ‘चिन्ताले नै चितासम्म पुर्याउँछ ।’
मनोविद्ले तनाव व्यवस्थापन गर्ने केही उपाय सुझाएका छन् ।
यदि तपाई तनावमा हुनुहुन्छ भने केही समय विश्राम लिएर गीत–संगीत सुन्नुस् । यसले तपाईको दिमाग र शरीरलाई आराम दिएर ब्लड प्रेसर र तनाव बढाउने हर्माेन घटाउन मद्धत गर्छ ।
साथीसँग कुरा गर्नुस्
जब तपाईलाई तनाब हुन्छ, त्यतिबेला तपाई केही समय विश्राम गरी साथीसँग आफ्ना समस्याबारे कुरा गर्नुस् । साथीको सम्बन्धन स्वस्थ जीवनशैलीका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । जब तपाई धेरै तनावमा भएकाले प्रियजनको आवाजले तनाव मुक्त गर्न सहज बनाउँछ ।
आफैसँग कुरा गर्नुस्
तनाब हटाउन साथीसँग कुरा गर्ने विकल्प नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा आफैसँग कुरा गर्नु पनि उत्तम विकल्प हुन सक्छ । यस्तोबेला तनावको कारण र समाधान कसरी हुन्छ भनी आफैसँग प्रश्न गर्नुस् । र, सबै कुरा ठीक हुन्छ भनी विश्वस्त रहनुस् ।
सन्तुलित भोजन खानुस्
तनाव र सन्तुलित भोजन परस्पर सम्बन्धित छन् । जब हामी तनावमा हुन्छौं, सन्तुलित खाना छाडी तयारी खानेकुरा खान्छौं । तनाव मुक्त गर्न तयारी खानेकुरा नखानुस् । यस्तो बेला फलफूल र तरकारी खान राम्रो हुन्छ । माछाजन्य खानेकुराले पनि तनाव कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
खुलेर हास्यो भने तनाव कम गर्न सकिन्छ । हास्दा शरीरमा भएको इन्डोरफिन नामक रसायन उत्पन्न भई तनाव बढाउने हर्माेन घटाउन मद्धत गर्छ । कमेडी फिल्म हेरे या चुटकिला पढ्यो भने पनि तनाव कम गर्न सकिन्छ ।
तनाव हटाउने एक अर्काे उपाय हो, ग्रिन टि पिउने । यसमा भएको रसायनले तनाव कम गर्न मद्धत पुर्याउँछ ।
व्यायाम गर्नुस् (कम्तीमा एक मिनेट)
व्यायाम गरेर पनि तनाव कम गर्न सकिन्छ । व्यायाम भन्नेबित्तिकै भारात्तोलन उठाउने र म्याराथनका लागि दौड्ने भन्ने होइन । घर, आँगन या कार्यालय वरिपरि हिँडेर पनि व्यायाम गर्न सकिन्छ । यसले रक्तसञ्चार गरी तनाव मुक्त गर्ने रसायन उत्पादन गरी तनाव हटाउन सहयोग पुर्याउँछ ।
निद्रा पुगेन भने तनाव हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा होला । अनिद्रा पनि तनावको एक कारण हो । दैनिक सातदेखि आठ घन्टा सुत्ने चिकित्सक नै सुझाउँछन् । तनाव भएका बेला चाडै टिभी बन्द गर्नुस्, बत्ती निभाउनुस् र आरामसँग सुत्नुस् । यसले तनाव कम गर्न सहयोग गर्छ ।
आरामसँग श्वास लिनुस्
आरामसँग श्वास लिए तनाव कम गर्न मद्धत पुर्याउँछ । सदियौंदेखि बौद्ध भिक्षु पनि ध्यान गर्दा श्वासप्रति सचेत हुँदै आएका छन् । भुइँ या कुर्सीमा बसेर आरामसँग तीन–चार मिनेट बिस्तारै गहिरो श्वास लिनुस् । तनाव कम गर्न सकिन्छ । किनकी छोटो श्वास तनावको कारण हो ।
जीवनशैलीबारे सचेत रहनुस्
माथिका यी उपाय छोटो अवधिका लागि तनाव कम गर्ने उपाय हुन् । जीवनशैलीबारे सचेत रहेर तनाव कम गर्न सकिन्छ । यो तनाव कम गर्ने दीर्घकालीन उपाय हो । मानसिक स्वास्थ्यबारे सचेत रही नियमित योग र ध्यान गरे तनावबाट मुक्त रहन सकिन्छ ।
यसबाहेक तनावबारे जानकारी लिएर पनि तनाव कम गर्न सकिन्छ ।
Tags : व्यायाम
27 June, 2022 4:08 pm
उपत्यकाको प्रदूषित खानेपानीले हैजा
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी प्रदूषित भएको कारणले हैजा देखिएको
27 June, 2022 12:40 pm
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा १२ जना हैजाका बिरामी भेटिएका छन्
27 June, 2022 8:29 am
बाँकेमा बढ्दै सिकलसेल एनिमिया बिरामी
काठमाडौँ । थारु समुदायमा बढी देखिएको सिकलसेल एनिमियाका बिरामी बाँकेमा
26 June, 2022 7:56 pm
पाटन अस्पताललाई हैजा रोग उपचारको ‘डेडिकेटेड अस्पताल’ तोकियो
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले पाटन अस्पताललाई हैजा रोगको